सरकारी स्कुलका विद्यार्थीका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाले किन्यो बस - Arthapage
सरकारी स्कुलका विद्यार्थीका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाले किन्यो बस
नरैनापुर ( बाँके) १० पुस – नरैनापुर भन्ने वित्तिकै विकट ठाउँको सम्झना आउँछ धेरैलाई । बाटो नपुगेको, स्कुल कलेज नभएको यस्तै यस्तै । तर अब त्यस्तो छैन नरैनापुर ! स्थानीय तहको गठनसंगै विकासका काम धमाधम भइरहेका छन् । अहिले फेरिदै छ, नरैनापुर ।
पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशिल क्षेत्रमा समेत गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको बताउँछन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाह । त्यसै कारणले गर्दा गाउँपालिकाले बिद्यार्थीलाई स्कुल ल्याउन लैजान आफ्नै बस खरिद गरेको छ । बिद्यार्थीको सहजताका लागि गाउँपालिकाले बस किनेको बाँकेमा नरैनापुर पहिलो ।
‘बालबालिका स्कुल आउनै मानेनन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले भने–‘उनीहरुलाई स्कुलसम्म आउने वातावरण बनाउन बस ल्याएका हौं ।’ बस केही दिनमै सन्चालन हुने छ । स्थानीय जयकिसन मावि र महेन्द्र माविका विद्यार्थीका लागि बस सन्चालन हुने छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर पनि धेरै वालवालिका बिद्यालय बाहिर छन् ।
नरैनापुरमा माबिको संख्या कम रहेको र आवश्यकता अनुसारका भौतिक पुर्वधार जस्ता कुराहरुको अभावका कारण प्रभावकारी शिक्षामा बाधक बनिरहेको समेत सरोकारवालाको भनाई छ । गाउँपालिकाभित्रका बिभिन्न बिद्यालयहरुमा बिभिन्न प्रकारको समस्या रहेको त्यसको समाधानका लागि अभिभावक, बिद्यार्थी र बिद्यालयसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शाहले बिद्यालयहरुमा रहेको समस्या बेला बेला सम्बन्धित ठाउँमा राख्न अनुरोध गर्दै बिस्तारै सबै समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय सरकार आएको धेरै समय नभएको र सबै समस्या एकैचोटी समाधान गर्न नसकिने हुँदा क्रमैसंग शिक्षाको समस्या समाधान हुने अध्यक्ष शाहले दावी गरे । गाउँपालिकाले पनि यहाँको बिकास क्रमलाई अगाडी बढाउनका लागि योजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः 7:04:51 AM |
Posted in नियमित समाचार, पूर्वाधार, ब्रेकिङ न्यूज
Prevलक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई साढे १४ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
Nextचोक बनाउन विमत्ती ! होला त कर्णालीमा जिल्ला नै समायोजन गर्ने सहमति ?